Ruushka oo si carro leh uga jawaabay diyaaradii Suuriya ee la soo riday - BBC News Somali
Ruushka oo si carro leh uga jawaabay diyaaradii Suuriya ee la soo riday
21 Juunyo 2017
Lahaanshaha sawirka IRANIAN TV
Image caption mid kamid ah diyaarada nooca drone-ska ee u Maraykanka soo riday
Dowladda Ruushka ayaa si carro leh uga jawaabtay diyaarad uu Maraykanmka ku soo riday koonfurta dalka Suuriya meel u dhow goobaha ay Maraykanku ka howgalaan.
Maraykanku waxuu sheegay in diyaaradan ay ahayd mid xasarad abuuraysay. Balse Ruushku waa uu cambaareeyey soo ridida diyaaradda.
Mar sii horraysay ayaa wasaarada gaashaandhiga ee Maraykan ee Pentagon waxay sheegtay in koonfurta Suuriya meel u dhaw goobta ay ka howlgalaan Maraykanka iyo xoogaga ay taageeraan ay ku soo rideen diyaarad nooca drones-ka.
Maalintii Axadda ayay ahayd markii diyaarad dagaal oo ay leedahay dowladda Suuriya la soo riday taasi oo sababtay in Ruushka u ka caroodo tallaabadaasi, waxaa uu ku hanjabay inuu bartilmaameedsan doono diyaarad iyo Drone walba oo soo gasha bartilmaameedkooda.
Ruushku waxaa kale oo uu sheegey in dhamaan uu joojinayo wadashaqayntii uu la lahaa Mareykanka ee ka hortaga shilalka hawada Suuriya, balse wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa u sheegay Maraykanka in ay ixtiraamaan madaxbanaanida dhuleed ee Suuriya, ayna ka fogaadaan tallaabo hal dhinac ah.
Hase ahaate Maraykanka ayaa isna horey u sheegay in uu isdifaaci doono.